ခွဲမွေးပြီးနောက် ဆက်လက်ခွဲမွေးခြင်းက ရိုးရိုးမွေးခြင်းထက် ပိုစိတ်ချရသလား - Hello Sayarwon
ခွဲမွေးပြီးနောက် ဆက်လက်ခွဲမွေးခြင်းက ရိုးရိုးမွေးခြင်းထက် ပိုစိတ်ချရသလား
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ ရေးသားသည်။ 20/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အချို့အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရိုးရိုးမွေးခြင်းကိုကြောက်၍ဖြစ်စေ ခွဲမွေးခြင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။ သို့သော်ဒီနည်းဟာ ရိုးရိုးမွေးခြင်းလောက်အန္တရာယ်ကင်းနိုင်သလား? Australia လေ့လာချက်အရ ပထမအကြိမ်တွင်ခွဲမွေးပြီး နောက်အကြိမ်တွင်လည်း ခွဲမွေးခြင်းက ရိုးရိုးမွေးသူများထက်ပို၍ရလဒ်ကောင်းတတ်ပါသည်။
ခွဲမွေးပြီး ရိုးရိုးမွေးခြင်းအတွက် လေ့လာချက်များ
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကလေး၃ယောက်တွင် ၁ယောက်ကခွဲမွေးကြသည်။ မွေးနည်းတိုင်းသည် သူ့အတိုင်းနဲ့သူ ဆိုးကျိုးရှိနိုင်သည်။
Australiaလေ့လာချက်အရ ၂၃၄၅ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွင် ခွဲမွေးပြီးရိုးရိုးမွေးရန် အတွက် သင့်တော်သည့်အမျိုးသမီးများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုထဲမှ ၁၁၀၈ယောက်မှာ ခွဲမွေးရန်ပြင်ဆင်ကြပြီး ၁၂၃၇အမျိုးသမီးများမှာ ရိုးရိုးမွေးရန်ပြင်ဆင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ရိုးရိုးမွေးရန်ပြင်ဆင်ထားသူများအနက် တစ်ဝက်အောက်သာ ရိုးရိုးမွေးပြီး ကျန်သူများမှာ ခွဲမွေးကြရသည်။
သတိပြုရန်မှာ ရိုးရိုးမွေးသောကလေးများတွင် နှစ်ယောက်မှာ အကြောင်းပြချက်အသေအချာမရှိဘဲ အသေမွေးခဲ့ပြီး ခွဲမွေးသူများတွင် သေဆုံးခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရိုးရိုးမွေးသူများတွင် ကလေးသေမွေးခြင်း သို့မဟုတ် မွေးကင်းစတွင်သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့သည် ၂.၄ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကြိုတင်စီစဉ်ခွဲမွေးသူများတွင် ဝ.၉ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။
သုံးသပ်ချက်အနေဖြင့် ခွဲစိတ်မွေးဖွားခဲ့ကြပြီး နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံခွဲစိတ်မွေးဖွားခြင်းသည် မိခင်ရော ကလေးရောအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသာထင်ရှားစွာလျှော့ချနိုင်ပါသည်။
ပို၍ စိတ်ချရသည်ဟုဆိုသော်လည်း မကြာခဏခွဲမွေးခြင်းသည်လည်း ဆိုးကျိုးများရှိပါသည်။
သားအိမ်နှင့်အနီးတဝိုက်တွင်ရှိသော အမာရွတ်များ – ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပြီးတိုင်း အမာရွတ်များနှင့်ဆင်တူသည့် တစ်ရှူးများပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ သိပ်သည်းမာကျောနေသော အမာရွတ်များသည် မွေးဖွားခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ခက်ခဲပြီး ကြာမြင့်စေပါသည်။
ဆီးအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှုများ – ခွဲစိတ်မွေးဖွားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမာရွတ်များက ဆီးအိမ်နှင့် သားအိမ်ကို တွယ်ကပ်သွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်
သွေးထွက်လွန်ခြင်း – မကြာခဏဗိုက်ခွဲမွေးခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများတွင် သွေးထွက်လွန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သွေးထွက်လွန်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ရန်အတွက် သားအိမ်ကိုဖယ်ရှားရသည့်အခြေအနေထိ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သားအိမ်ထုတ်လိုက်ရနိုင်သည့်အခြေအနေသည် ပထမကိုယ်ဝန်ခွဲမွေးချိန်တွင် ဝ.၆၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ စတုတ္ထကိုယ်ဝန်ခွဲမွေးချိန်တွင် ၂.၄၁ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်သွားစေနိုင်သည်ဟုဆိုပါသည်။
အချင်းတွင်ပြဿနာဖြစ်ခြင်း – သင်သည်မကြာခဏ ခွဲစိတ်မွေးဖွားရပါက အချင်းတွင် ပြဿနာများစွာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချင်းသည် သားအိမ်နံရံတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်တွယ်ကပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အချင်းက သားအိမ်ဝကို ပိတ်ဆို့နေခြင်းတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ အချင်းကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သားအိမ်နံရံထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာဝင်ရောက်တွယ်ကပ်ခြင်းက ပထမကိုယ်ဝန်ခွဲမွေးချိန်မှာ ဝ.၂၄ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး စတုတ္ထကိုယ်ဝန်ခွဲမွေးချိန်တွင် ၂.၁၃ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ကလေးကို ဒီနည်းလမ်းနဲ့ မွေးဖွားဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်း သတိထားပါ။
http://www.webmd.com/baby/news/20120313/are-repeat-c-sections-safer-than-natural-birth#1/ Accessed April 16, 2017
How many C-sections canawoman safely have? http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/c-section/expert-answers/c-sections/faq-20058380/ Accessed April 16, 2017
Cesarean Section – Topic Overview. http://www.webmd.com/baby/tc/cesarean-section-topic-overview#1/ Accessed April 16, 2017
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်သလဲ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ